iPhone 11 ရဲ့ သိထားသင့်တဲ့အချက်များ - The Lifestyle Myanmar
Home Technology Mobile နောက်ဆုံးထွက် iPhone 11 ရဲ့ သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
နေ့စဉ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်ရွေးချယ်ကြတဲ့ smart phoneကတော့ iPhone လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး…။ ကွယ်လွန်သူ Steve Jobs ကိုယ်တိုင်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီကိရိယာဟာ ဈေးကွက်အတွင်းမှာ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဝင်ကြွားစရာ အရာတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့ iPhone11ဟာ ဘယ်လို့မွမ်းမံထားမယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာတော့အဟုတ်ပါဘူး…။
The Verge ဝက်ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ iPhone 11 ၊ iPhone 11 pro နဲ့ iPhone 11 Max တို့ဟာ ပိုမို အဆင့်မြင်မားစွာထွက်ရှိလာပါတယ်။
iPhone 11 မော်ဒယ်မှာ အမှတ်တံဆိပ်အသစ် dual camera, အလင်းပုံရိပ်တွေကိုစုစည်းပေးတဲ့ (OIS)၁၂မစ်ဂါပစ်ဆယ် camera တစ်လုံးနဲ့. တစ်ရာနှစ်ဆယ် ဒီဂရီပတ်လည်ကြည့်တဲ့ ထောင့်ကျယ် မှန်ဘီလူးရှိတဲ့ ၁၂မစ်ဂါပစ်ဆယ် camera တစ်လုံးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆယ်ဖီရိုက်တဲ့ ကင်မရာကလည်း ၁၂မစ်ဂါပစ်ဆယ်အထိရှိပီးတော့ အနေးပြကွက် (slo-mo)videoအားစွမ်းရည်နှင့် resolution 60FPSမှာ resolution 4kအထိ videoမှတ်တမ်းရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ iPhone 11 Pro နဲ့ Pro maxကဘာကြောင့်ပိုပီးဈေးကြီးတာလည်း?ကောင်ပီး ဒီဖုန်းတွေစာ သူတို့ရဲ့ညီငယ် 11လိုတူညီတဲ့ Featureပါရှိတဲ့triple camera ပါရှိပါတယ်။ အပိုပါလာတဲ့ Camera တစ်လုံးကတော့ 12-megapixels telephoto/potrait ရိုက်လို့ရပါတယ်။ အပိုပါလာတဲ့ cameraတစ်လုံးရဲ့နောက်ထပ်စွမ်းအင်ကတော့ ဓာတ်ပုံး ကိုးပုံကနေတစ်ခုချင်းဆီထွက်လာတဲ့ အကောင်းဆုံးအဂါင်္ရပ်တွေကို စုစည်းပေးနိုင်တာပါ။
ဓာတ်ပုံအလှရိုက်သူတွေအတွက် အလွန်ဘဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ Hardware ပိုင်းမှာကတော့ A13 Bionic processor and GPUတို့နဲ့ သ့်င့်ကိုအလွန်လှပတဲ့ အနာဂတ်ဆီကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ။
iPhone 11 က မျက်နှာပြင်အကျယ် ၆.လက်မLcd ဈေးပိုငြီးတဲ့ Pro နဲ့ pro max ကတော့၅.၈လက်မနဲ့ ၆.၅လက်မ OLEDအကျယ်အသီးသီးရှိပါတယ်။ iPhone 11ကတော့ အဖြူ အဝါ အနက် အနီ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့အရောင်ကတော့ ခရမ်းနုရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်တို့ဘဲဖစ်ပါတယ်။ Proနဲ့ pro max ကတော့မီးခိုးရောင် ငွေရောင် ရွှေရောင် အစိမ်းရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone 11— USD 814 , iPhone Pro— USD 1146 , iPhone Pro max— USD 1269
နစေ့ဉျဖုနျးအသုံးပွုသူတိုငျရှေးခယျြကွတဲ့ smart phoneကတော့ iPhone လို့ပွောရငျမမှားပါဘူး…။ ကှယျလှနျသူ Steve Jobs ကိုယျတိုငျစတငျပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဒီကိရိယာဟာ ဈေးကှကျအတှငျးမှာ သုံးစှဲသူတှအေတှကျ ဝငျကွှားစရာ အရာတဈခုအဖွဈတညျရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ယနထှေ့ကျရှိလာတဲ့ iPhone11ဟာ ဘယျလို့မှမျးမံထားမယျဆိုတာ အံ့သွစရာတော့အဟုတျပါဘူး…။
The Verge ဝကျဆိုဒျမှာ ဖျောပွထားခကျြအရ ဒီတဈကွိမျမှာတော့ နောကျဆုံးမြိုးဆကျဖွဈဆကျဖွဈတဲ့ iPhone 11 ၊ iPhone 11 pro နဲ့ iPhone 11 Max တို့ဟာ ပိုမို အဆငျ့မွငျမားစှာထှကျရှိလာပါတယျ။
iPhone 11 မျောဒယျမှာ အမှတျတံဆိပျအသဈ dual camera, အလငျးပုံရိပျတှကေိုစုစညျးပေးတဲ့ (OIS)၁၂မဈဂါပဈဆယျ camera တဈလုံးနဲ့. တဈရာနှဈဆယျ ဒီဂရီပတျလညျကွညျ့တဲ့ ထောငျ့ကယျြ မှနျဘီလူးရှိတဲ့ ၁၂မဈဂါပဈဆယျ camera တဈလုံးတို့ဖွဈကွပါတယျ။ ဆယျဖီရိုကျတဲ့ ကငျမရာကလညျး ၁၂မဈဂါပဈဆယျအထိရှိပီးတော့ အနေးပွကှကျ (slo-mo)videoအားစှမျးရညျနှငျ့ resolution 60FPSမှာ resolution 4kအထိ videoမှတျတမျးရယူနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ iPhone 11 Proနဲ့ Pro maxကဘာကွောငျ့ပိုပီးဈေးကွီးတာလညျး?ကောငျပီး ဒီဖုနျးတှစော သူတို့ရဲ့ညီငယျ 11လိုတူညီတဲ့ Featureပါရှိတဲ့triple camera ပါရှိပါတယျ။ အပိုပါလာတဲ့ Camera တဈလုံးကတော့ 12-megapixels telephoto/potrait ရိုကျလို့ရပါတယျ။ အပိုပါလာတဲ့ cameraတဈလုံးရဲ့နောကျထပျစှမျးအငျကတော့ ဓာတျပုံး ကိုးပုံကနတေဈခုခငျြးဆီထှကျလာတဲ့ အကောငျးဆုံးအဂါင်္ရပျတှကေို စုစညျးပေးနိုငျတာပါ။
ဓာပုံအလှရိုကျသူတှအေတှကျ အလှနျဘဲစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ဖုနျးတဈလုံးပါ။ Hardware ပိုငျးမှာကတော့ A13 Bionic processor and GPUတို့နဲ့ သျ့ငျ့ကိုအလှနျလှပတဲ့ အနာဂတျဆီကိုချေါဆောငျသှားမှာပါ။
iPhone 11 က မကျြနှာပွငျအကယျြ ၆.လကျမLcd ဈေးပိုငွီးတဲ့ Pro နဲ့ pro max ကတော့၅.၈လကျမနဲ့ ၆.၅လကျမ OLEDအကယျြအသီးသီးရှိပါတယျ။ iPhone 11ကတော့ အဖွူ အဝါ အနကျ အနီ အသဈထှကျရှိလာတဲ့အရောငျကတော့ ခရမျးနုရောငျနဲ့ အစိမျးရောငျတို့ဘဲဖဈပါတယျ။ Proနဲ့ pro max ကတော့မီးခိုးရောငျ ငှရေောငျ ရှရေောငျ အစိမျးရောငျတို့ဖွဈပါတယျ။
Previous articleမြန်မာ-ဂျပန်ပွဲ၌ ကွင်းထဲပြေးဝင်သူကြောင့် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါ်လာ နှစ်သောင်းအထိ ဒဏ်ကြေး ဆောင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိ
Next articleမန္တလေးမှာ ဖြစ်သွားတာတဲ့ဗျာ။ မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို ဒီလိုတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး